गर्भावस्था बारे जान्नै पर्ने १४ कुरा - Everest Dainik - News from Nepal
गर्भावस्था बारे जान्नै पर्ने १४ कुरा
महिलाहरुका लागि गर्भावस्था विशेष अवस्था हो । त्यस्तै परिवारका लागि पनि । यो अवस्था खुशी र चुनौतिपूर्ण हन्छ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिलाहरु गर्भावस्थामा आफ्नो ठूलो पेटलाई प्रति असहज महशुस गर्छन र लजाउछन । यो निकै जोखिम पूर्ण अवस्थाका बारेमा धेरैलाई सामान्य जानकारी समेत नहुँनु ठूलो समस्या हो । गर्भावस्थाका बारेमा जान्नै पर्ने केहीँ कुराबारे यहाँ जानकारी गराउँदै छनैं:
कुनबेला गर्भ बस्छ ?
नियमित रुपमा (प्रत्येक २८ देखि ३० दिनमा) महिनावारी हुने महिलामा महिनावारीको १० औंदेखि १८ औं दिनसम्म यौनसम्पर्क गरे गर्भ रहन सक्छ ।
गर्भवती भएका बेला तौल वृद्धि
गर्भाधानका क्रममा शिशु, सालनाल, शिशु वरिपरिको पानी, पाठेघरको वृद्धि र शरीरका विभिन्न भागमा प्रोटिन एवं बोसो जम्मा हुनाले गर्भको अवधिमा करिब १० देखि १२ किलोसम्म तौल बढ्न सक्छ।
कसरी जन्मन्छन् छोराछोरी ?
पुरुषमा एक्स र वाई दुवै क्रोमोजम हुन्छ भने मा स्त्रीमा एक्स एक्स मात्र हुन्छ । जति वेला पुरुषबाट वाइ र स्त्रीबाट आएको एक्स क्रोमोजोमको मिलन हुन्छ त्यति बेला छोरा जन्मिन्छ । त्यसैगरी पुरुषबाट पनि एक्स क्रोमोजोम आएर एक्सएक्स क्रोमोजोमको मिलन हुन्छ त्यतिबेला छोरी जन्मिन्छ ।
कलिलो उमेरमा गर्भवती भए के हुन्छ ?
कलिलो उमेरमा गर्भधारण गरे सुत्केरी व्यथा लामो हुने, शिशु पाउन गा¥हो हुने, शिशु पनि कम तौलको हुने एवं महिना नपुगी व्यथा लाग्ने हुँदा आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा हुन्छ ।
शिशु जन्मने मिति कसरी निकालिन्छ ?
नियमित रुपमा महिनावारी भैरहेका महिलामा अन्तिमपटक महिनावारी भएको दिनमा ९ महिना ७ दिन जोडेमा शिशु जन्मिने मिति निस्कन्छ । यसरी हिसाब गरी निकालेको दिनमा करिब ५ प्रतिशतले शिशु जन्माउँछन । भने अधिकांश वा करिब ८० प्रतिशत महिलाले उक्त दिनको दुई हप्ताअघि वा एक हप्तापछि शिशु जन्माउँछन् ।
कहिले गर्ने अल्ट्रासाउण्ड ?
सामान्यतयः गर्भ रहेका करिब १६ देखि २२ हप्ताभित्र पहिलो पटक अल्ट्रासाउन्ड (भिडियो एक्सरे) गराउनु पर्छ । गर्भमा रहेको शिशुको अवस्था, गर्भ ठीक ठाउँमा बसेको छैनन भनि थाहा पाउन यो आवश्यक छ । कुनै किसिमको शारीरिक समस्या छ–छैन थाहा पाउन पनि चिकित्सले अल्ट्रासाउण्ड गराउन सल्लाह दिने गरेका छन् ।
गर्भमा कहिले चल्छ शिशु ?
गर्भावस्थाको करिब १८ हप्तापछि शिशु चलेको महसुस हुन्छ । गर्भ रहेको करिब ३६ हप्तापछि शिशु तल सर्ने हुनाले सास फेर्न अलि हलुका महसुस हुन्छ ।
गर्भवतीले के–के जाँच गराउनुपर्छ ?
प्रत्येक गर्भवती महिलाले हेमोग्लोबिन, रक्त समूह, यौन रोग, एचआईभी एवं हेपाटाइटिस बी, सुगरसम्बन्धी रगत जाँच, पिसाब जाँच एवं भिडियो एक्स–रे गराउनुपर्छ । यसका अतिरिक्त कतिपय महिलामा देखापरेको स्वास्थ्य समस्याअनुसार थप जाँच गराउनुपर्छ । जाँचमा प्रत्येक पटक तौल लिने, रक्तचाप र नाडीको गति नाप्ने एवं रक्तअल्पता भए नभएको तथा खुट्टा सुन्निएको छ, छैन जाँच्नुपर्छ ।
कस्ता गर्भवतीलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ ?
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु एवं मिर्गौलाको रोगी, नेगेटिभ रगत समूह भएकी, पेटभित्रको शिशु सानो शंका गरिएकी, जुम्ल्याहा शिशु बोकेकी, पहिले पटक–पटक गर्भ तुहिएकी गर्भवती महिलालाई निगरानीमा राख्नुपर्छ ।
कहिले–कहिले बढ्छ पेटको उचाई ?
गर्भावस्थाको १२ हप्तापछि मात्र बाहिरी पेट जाँच गरी पाठेघर छाम्न सकिन्छ । गर्भावस्थाको १२ हप्तामा पुठ्ठाको हड्डी अघिल्लो भागसम्म, २० हप्तामा नाइटोको तल्लो भागमा, २४ हप्तामा नाइटोको माथिल्लो भागमा र ३६ हप्तामा मध्यछातीको हड्डीमुनिसम्म पाठेघरको उचाइ बढ्छ।
शिशुको अंग कुन अवधिमा के बढ्छ ?
गर्भ रहेको ५ देखि ८ हप्तामा मानव शरीरका मुख्य अङग र स्नायु प्रणालीको विकास हुन्छ भने ६ हप्ताबाट मुटुको धड्कन सुरु हुन्छ । गर्भावस्थाको ८ हप्तासम्ममा अनुहार (मुख) को आकार आउँछ भने ९ देखि १२ हप्तामा शरीरका भित्री अङग फोक्सो, मिर्गौला कलेजो, अस्थिपञ्जर बन्न थाल्छन् ।
गर्भावस्थाको चौथो हप्तादेखि दसौं हप्तासम्म गर्भस्थ शिशुको मुटु तथा स्नायु प्रणालीअन्तर्गतका महत्वपूर्ण अंग निर्माण हुने भएकाले अनावश्यक रुपमा जथाभावी औÈधि सेवन तथा चुरोट एवं मद्यपान गरे गम्भीर प्रकारका शारीरिक समस्या भएका शिशु जन्मन सक्छन् ।
गर्भवतीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन् ?
पहिलो गर्भावस्थामा दुईपटक टीटी खोप लिनुपर्छ भने आइरन एवं क्याल्सियम क्रमशः पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकदेखि खानुपर्छ । यसका साथै शक्ति प्राप्त हुने थप कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनयुक्त खाना खानुपर्छ ।
गर्भावस्थामा हुन सक्ने समस्या के–के हुन् ?
गर्भावस्थामा हुन सक्ने साधारण समस्यामा बिहानीपख वाकवाकी लाग्ने, मुखमा अमिलो पानी आउने र छाती पोल्ने, पिसाब छिटो–छिटो लाग्ने, योनीश्राव (सेतो पानी) अलि बढी बग्ने, पिडौला एवं जननेन्द्रीय वरिपरिका नसा फुल्ने, कब्जियत हुने, खुट्टा सुन्निने, कम्मर दुख्ने, पिडौला बाउडिने हुन् ।
गर्भावस्थाकाे अन्तिम समयमा देखा पर्ने चिन्ह के-के हुन् ?
गर्भावस्थाको अन्त्यतिर व्यथा लाग्नुपूर्व देखा पर्न सक्g] संकेतहरुः
हल्का रगत मिसिएको सिंगान जस्तो देखा पर्ने,
पिसाबजस्तै पानी बग्ने आदि ।
उच्चरक्तचाप, मधुमेह, मुटुको समस्या, मिर्गौलाको खराबी, मूत्रनली संक्रमण, थाइरोइड ग्रन्थीको काममा घटीबढी, छारे रोग, रक्तअल्पता, हेपाटाइटिस, यौन रोग, एचआईभी एड्स, दम, संक्रामक तथा परजीवीजन्य रोग, औंलो र शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्ने कतिपय पेटको पीडा आदि गर्भावस्थासगै हुनसक्ने अन्य स्वास्थ्य समस्या हुन् ।
ट्याग्स: Pregnency Period